Apple iphone ogologo video Commercial Spoof
Fraịde, Septemba 21, 2012 Fraịde, Septemba 21, 2012 Adam Obere
Ọ bụ Friday na oge maka ụfọdụ levity! Obi na-atọ m ụtọ nke ọma na ịhụnanya mgbe achọrọ ya maka ụlọ ọrụ dịka Apple (nke m bụ nwa nwoke niile). Izu okè na-eweta na ya ohere maka ịkwa emo… a video si Satire ntu ya! Ọ bụ ezie na echiche guitar bụ ezigbo mma 🙂
N'akụkụ dị n'akụkụ, iOS6 apụla ma anyị ahụla ụfọdụ ezigbo atụmatụ. Ahụkwala m ahụhụ dị na nwunye. Otu ihe atụ bụ na m nọ na ekwentị oku n'ụtụtụ a na mkpu m kwụsịrị off ejighị n'aka ma ọ bụrụ na nke ahụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ na nke ikpeazụ mbipute ma ọ bụ ntakịrị ihe iwe.
Dị nnọọ ole na ole ngwa ọdịnala na-enwe ụfọdụ ihe isi ike na ụfọdụ chinchi. Echere m na ma Apple ma ndị mmepe ngwanrọ nwere ọrụ n'ebe ahụ. Apple na-ejigide eriri siri ike gburugburu usoro ngwa ya iji mesie ogo ike. Ọ bụ ụfọdụ n'ime àjà na nnwere onwe nke ndị ọrụ Apple na-ere maka abamuru nke nkwụsi ike. Ọ dị ka ha emeghị nnwale ọ bụla nke ngwa dị ugbu a iji hụ na ha arụ ọrụ zuru oke, n'agbanyeghị.
Na ndị mmepe Ngwa nwere ohere ibudata iOS6 wee nwalee ngwa ha n'ụzọ zuru oke tupu mwepụta ahụ, yabụ na-eme ha ihere maka ụfọdụ atụmatụ anaghị arụ ọrụ. Ahụbeghị m nnukwu nsogbu ọ bụla ... naanị obere nsogbu na nsogbu postback.
PS: Ekele dịrị Ben McCann na Katalist na-agba izu maka ịkesa nchọta a!
Sep 22, 2013 na 1: 10 AM
Na hilarious… ma na “fanboy” n'ebe ahụ. Eziokwu ahụ bụ na ị bụ onye na-agba agba na-egosi enweghị nghọta zuru ezu nke teknụzụ, ahịa na hypnosis. apụl na-etinye ọtụtụ n'ime ya revenue na mgbasa ozi na lekwasịrị credulous iche iche nke ndị mmadụ na-na-gụnyere wen ọ na-abịa tech, ma nwere oke oru ikike, na-adị mfe na-atụ aro na-amasị ka nrọ. Ọ dịghị ihe dị njọ na nrọ, mana site na iji hypnosis na mgbasa ozi, apụl na-azụta ozi zoro ezo nke na-akpali ndị hụrụ n'anya n'anya, jikọta ha n'echiche nke nrọ / ịdị iche ma mesịa jikọta ndị ahụ na akara apụl. N'ezie ndị mmadụ ga-asị na nke a anaghị eme, mana ọ dị mfe ịme nke ahụ mgbe enwere ihe na-aga n'okpuru ọkwa nke nghọta ha. Ọzọkwa, apụl na-echepụta ọ bụ mgbasa ozi iji mee ka ndị ọrụ chee na ha na-enweta ọganihu teknụzụ kachasị na teknụzụ mgbe ha na-abụkarị ihe ochie, ngwaike ochie ha na-enweta maka ọnụ ala, ma na-ere maka ọnụahịa dị elu. Imac bụ ihe atụ zuru oke. Apple ịbụ "onye ọhụụ" kwesịrị maka ọnụahịa nke $ 2000 nye naanị ihe kachasị ọhụrụ na ngwaike maka ikike imac ha? Njọ, kama PC nwere isi i7 maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2, apụl ka na-ebugharị ndị ahịa na-enweghị atụ core2duo cpu.
N'ihi ya, mgbe m kwuru na ha amachaghị nke ọma dịka ha kwenyere na ha bụ. Nke ahụ na-esi ísì ụtọ n'ezie, n'ihi na ndị ahịa mac nwere nnukwu ntọala nke ndị kwenyere na ịdezi vidiyo na ndị a bụ nke kachasị mma. Mana ọ ga - abụ 40 ma ọ bụ 50% ogologo iji nye ihe ọ bụla na $ 2000 imac karịa ka ọ ga-eme na windo $ 700 pc na-agba ọsọ. O doro anya na ndị mmadụ ga-asị, "windoze, omg, windows movie maker", mana mgbe ị zọpụtara $ 1300 na pc, ịzụrụ ihe nlere vidiyo vidiyo nke $ 80 ka $ 150 bụ enweghị ụbụrụ. Ma ọ bụ ịnweta otu n'efu na weebụ. Mana otutu umuaka umuaka bu umuaka n'ihi okwu ojoo di iche iche nke Jobs na enye n'oge nzuko ndi isi. Ekwughi na enweghi ma ọ dịkarịa ala ihe ndị dị jụụ na echiche na ihe ịga nke ọma, mana onye ọ bụla m na-ele nwere zoro ezo ụgha na ya, ikwubiga okwu ókè na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ otu usoro mgbe niile. Ọrụ dị na jeans, iburu ìgwè mmadụ ahụ n'isi, ma ọ bụ mkpọsa a na-enweta na a-mac na abụba Ihọd ịbụ PC na mkpa Ihọd ịbụ mac, na-eme ihe ọchị nke pc wdg wdg Ọrụ nwere ọtụtụ narị vidiyo ebe ọ na-arahụ aghụghọ kwa. Na otu agadi ọ kwetara na ọ bụ maka ịzụ ahịa, ma kwuo na ya na-agbanwe ụzọ Nike si ere ahịa macs. Ekwula maka mips ma ọ bụ megahertz, sọọsọ maka ọdịnihu, na ndị rụzuru nnukwu ihe, dịka Einstein, wdg. Maka Nike ha jiri Michael Jordon na shazam, ahịa anọ anọ. Maka m, apụl na-abụ phony mgbe niile, ọkachasị maka kọmputa kọmputa ha.
Sep 22, 2013 na 2: 57 AM
Hypnosis? N'ezie? Nke a anaghị emegide echiche gị na ha abụghị teknụzụ?
Enweghi m ike ịchọta nkọwa gị kwenyere na otu mmeghachi omume na mmeghachi omume ị nwere. O doro anya na ị naghị amasị Apple ma ghara iji ngwaahịa ndị ahụ. M n'ezie na-eji ma Microsoft na Apple. N'ezie m ka nwere PC mara mma n'ụlọ. Mana Mac m dị ọsọ ọsọ, nwee ntụkwasị obi ma maa mma. N'ime ndị enyi m nke zụtara $ 700 PC ị kọwara, ha esikwala na 3 nke shitty plastik ihe n'otu oge ahụ enwegoro m Mac Book Pro.
Oh .. na iOS7 di egwu! Nwee anụrị ị na - achọ bọtịnụ Mmalite gị… ọ laghachite?